भक्तपुरबाट सिक्नुपर्ने पाठ | SouryaOnline
डा. विवेध न्यौपाने २०७८ माघ ६ गते ७:१० मा प्रकाशित
डा. विवेध न्यौपाने
के हामी नेपालको अरू भागलाई पनि भक्तपुरको जस्तै स्वास्थ्य सेवामा अग्रणीरुपी बनाउँदै लान सक्छौँ ? के हामी यस्तै राम्रो राजनीतिक सुसंस्कार विकास गर्न सक्छौँ ? के सामाजिक विसंगति हटाएर व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि समाज र राष्ट्रलाई राख्न सक्छौँ ? के हामी म प्रवृत्तिको कुण्ठालाई छिचोलेर मानव हितका लागि तत्पर छौँ ?
यदि हामी नेपालको स्वास्थ्य परिवेशलाई तथ्यांकको आधारमा हेर्छौं भने स्थिति दयनीयभन्दा पनि तल छ । वार्षिक मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर या कुनै पनि स्वास्थ्यको आँकडा लिऔँ, त्यो हीनताबोधी छ । म नेपालको स्वास्थ्य अवस्थालाई दुई तहमा केलाउन चाहान्छु । पहिलो स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू र दोस्रो स्वास्थ्यका जनशक्ति । पूर्वाधारको कुरा गर्दा प्रत्येक वार्षिक बजेटमा ‘स्वास्थ्य’ले दोस्रो वा तेस्रो (पहिलो शिक्षा र आन्तरिक प्रशाशन पछि) स्थान पाउँछ । तर त्यसको सही सदुपयोगिता, त्यसको सही परिचालन र समग्रमा भन्नुपर्दा त्यसको सही व्यवस्थापन भएको छैन । त्यसकै हविगतले होला ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या प्राथमिक स्वास्थ्यबाट पनि वञ्चित छन् । भएका पूर्वाधारहरूको पनि अनुपयोगिता (प्रसंग– बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञानप्रतिष्ठान लगायतका सरकारी निकायमा थन्किएका करोडौँ मूल्यका उपकरणहरू) ले समस्यालाई अझैं मलजल दिइरहेको छ । सरकारी र अर्ध सरकारी निकायमा भएका चरम भ्रष्टाचार, अख्तियारको दुरुपयोग र राजनीतिक अराजकताले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ । गाउँ एवं दुर्गम भेगहरूमा सरकार र स्थानीय निकायको अगन्य उपस्थिति हामी सबैमा जगजाहेर नै छ ।
अर्को पाटो भनेको उनशक्ति हो । उपकरणले मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुँदैन, त्यसलाई चलाउन त सही परिचालक चाहिन्छ । यसमा पनि नेपाल मायालाग्दो अवस्थामा छ । चिकित्सक, प्राविधिक व्यक्ति, औषधि उत्पादक आदिले स्वास्थ्य जनशक्तिको निर्माण हुन्छ । नेपालीहरूमा दक्षताको कमी छैन तर सही दक्षहरू भनाउँदा विदेशी डलरमा किल्ला गाढेर बसेका हुन्छन् । यसमा उनीहरूको मात्र गल्ती देखिँदैन । आफूले गरेको श्रमको सही मूल्यांकन गर्न, आफ्नो दक्षतालाई अहिलेको बदलिँदो समाजमा रूपान्तरण गर्न र आफ्नो दक्षताको स्तर बढाउन पनि उनीहरू बिदेसिएको मेरो अनुमान छ । यसमा पनि म नीति निर्माताहरूको अदूरदर्शिता र भविष्यको अज्ञानतालाई नै दोष दिनुपर्ने हुन्छ । दुई दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्य शिक्षण संस्था भएता पनि लोभ, लालच र सोर्सफोर्सले गर्दा जनशक्ति निर्माणलाई ………. गरेको अनुभूति गर्दछु, सायद आफैं एउटा चिकित्सक भएर होला ।
यी त भए मैले सतही रूपमा देखेका बेथितिहरू । अझ केलाउँदै जाने हो भने सायद मेरो कलमको मसी सकिन्छ होला तर स्वास्थ क्षेत्रको विकराल समस्याहरू प्रकाशमा आउँदैन । तर आफैँ एउटा चिकित्सक भएर होला अझ पनि आश मरेको छैन, एक सुदृढ र सबल स्वास्थ समाजको निर्माण गर्न । भन्छन नि कमलको फूल पनि हिलोमा न फुल्छ, सबै औँलाहरू बराबर हुँदैन, त्यसैले म मेरो कलमका धारलाई भक्तपुर जिल्लाको स्वास्थ स्थितिमा केन्द्रित गर्न चाहान्छु । सायद मैले मेरो युवा जोशका दुई/चार वर्ष खर्च गरेको भूमि, मेरो कर्मथलो भएर होला ।
हुन त स्वास्थ क्षेत्रमा आशातीत व्यक्तित्वहरू नभएका होइनन्, कसैलाई गोविन्द केसीको सेवा र समर्पणले प्रभावित गर्यो होला, कसैलाई उपेन्द्र देवकोटाको विद्वताले या कसैलाई स्वास्थ मन्त्री भएका गगन थापा जस्ता नेताका नीति तथा बोलीले । तर वस्तुपरक भएर अध्ययन गर्दा अचानोको पिर खुकुरीलाई थाहा हुँदैन भनेझैँ मैले काम गर्ने संस्थाले अनेकन समस्याहरूसँग जुध्दै, समाधान गर्दै स्वास्थ्य समाजमा नयाँ आयाम थपेको छ ।
म भर्खरै यस क्षेत्रमा आफनो पाइला चाल्दै गरेको युवा, तर मेरो सोचले म मात्र होइन, म जस्ता लाखौँ जोशहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । म यसलाई आप्mनो निचोड त भन्दिनँ, तर म तुषारो लागेको बिहानीमा आशाको किरण देख्दै छु र सूर्यको प्रकाशले हिमाललाई सुनौलो हुने गरी टल्काएको महसुस गर्दछु । भक्तपुरलाई म स्वास्थ क्षेत्रमा गरेको प्रगतिप्रति सबैभन्दा सम्भावना बोकेको सहरको रूपमा अग्रणीमा राख्दछु ।
यहाँ स्वास्थ क्षेत्रलाई हरेक वर्गले गम्भीर रूपमा लिएको भान गर्दछु । यहाँ भएका स्वास्थ क्षेत्रका पूर्वाधारहरूलाई दिनप्रतिदिन व्यवस्थित र स्तरीय बनाइँदै छ । यहाँ हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्यको सुलभ पहुँचका लागि स्थानीय निकाय, भक्तपुरका राजनीतिकर्मीहरूको अहोरात्र मिहिनेत र दूरदर्शिता जगजाहेर छ । अझ यहाँ स्थानीय रूपमा गरिएका कामहरू जस्तै स्वास्थ्य बिमाको सर्वसाधारणको पहँुच, निम्न पैसामा बहिरंग सेवा आदि अझ सराहनीय छ । हरेक वडामा स्वास्थ संस्थाको उपस्थितिले समाजमा स्थानीय सरकारको राम्रो उपस्थितिको आभास दर्साउँछ जसले मानिसको सरकारप्रतिको भरोसा कायम राख्दछ । अझ पूर्वाधारको विकास भइरहेको अवस्थामा म जस्तो काँचो युवाले अथाह सुनौलो भविष्य बुनिरहेको छु ।
सानो तर महत्वपूर्ण कुरा भनेको कुनै पनि गन्तव्यमा पुग्न सबैभन्दा पहिलो कुरा सुरुआतको पहिलो कदम हो । एउटा पाइलाले नै गन्तव्यको नीव राख्दछ । त्यस्तै अवस्थामा हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति पुगेको छ । नेपालको समग्र स्वास्थ्य अवस्था अध्ययन गर्दा भक्तपुरले स्वास्थ्यमा धेरै सम्भावना बोकेको देख्दछु । एक हातले ताली बज्दैन भनेझैँ यहाँ एक जनाको मिहिनेतले मात्र गर्दा भक्तपुर यो अवस्थामा आएको होइन । सय थरी बाजा एउटै ताल भनेझैँ यहाको समाज, स्थानीय सरकार र भक्तपुरका अग्रज राजनीतिज्ञहरूको हात र साथ छ ।
मेरो बाल्य अवस्थादेखि नै नारायणमान बिजुक्छे रोहितले मजदुर र किसानका लागि गरेका असीम कार्यहरू मगजमा घुम्छन् । केन्द्रको सरकारसँग जुधेर होस् वा सामाजिक अभियन्ता भएर, भक्तपुर यिनको अभिभावकीय भूमिकामा ‘जुःजुः द्यौ’ झैं मिठिएको छ । त्यसैले त भक्तपुरको सामाजिक आधार बलियो छ । अझ सुनिल प्रजापति, प्रेम सुवाल जस्ता जुझारु नेताहरूले यो विरासत अघि बढाइरहेका छन् । छिमेकी जिल्लाहरू काठमाडौं र ललितपुरमा जस्ता पाँच तारे अस्पतालको आवश्यकता छैन भक्तपुरवासीलाई, जसले स्वास्थ्को नाममा पैसाको मात्र व्यपार गर्छन् । यहाँका अग्रणीकै अथक प्रयासले यहाँको सार्वजनिक स्वास्थ संस्थाले विश्वस्तरीय सेवा दिइरहेको छ । यसलाई म राजनीतिक सुसंस्कारकै संज्ञा दिन्छु । नेपाल मजदुर किसान पार्टी चाहे सत्तामा भएको अवस्थामा होस् या विपक्षमा, यसको समाजका आधारभूत आवश्यकता र हकहितको लागि जहिले पनि आवाज बुलन्द छ । त्यसैले त यहाँ सामाजिक विभेद कम छ, मानिसको चेतना बढी छ जसले एउटा स्वास्थ्य समाजको निर्माण गर्न मद्दत गरेको छ ।
फेरि आफनो चञ्चले मनमा घुम्छु, सोच आकाशिन्छ अनि मनमा एउटा प्रश्न उब्जन्छ, के हामी नेपालको अरू भागलाई पनि भक्तपुरको जस्तै स्वास्थ्य सेवामा अग्रणीरूपी बनाउँदै लान सक्छौँ ? के हामी यस्तै राम्रो राजनीतिक सुसंस्कार विकास गर्न सक्छौँ ? के सामाजिक विसंगति हटाएर व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि समाज र राष्ट्रलाई राख्न सक्छौँ ? के हामी म प्रवृत्तिको कुण्ठालाई छिचोलेर मानव हितको लागि तत्पर छौँ ?
सन्दर्भ : ‘स’
‘स’ नेपाली वर्णमालाको एक सदस्य । ‘स’ का अथाह शब्दहरू होलान् । सोचकै उपज न त हो । साथ, सहयोग, सहकार्य आदि इत्यादिले यसको महिमा गाउँछन् । अझै घोत्लिँदै जान्छु, बृहत्तरतातिर उम्कन्छु, सगरमाथारूपी आफ्नो सन्दर्भ केलाउँछु अनि आउँछ आफू जिउने धरातल–सपरिवार, साथी र समाज । तर ‘स’ बाट हुने सुख, समृद्धि, शक्ति, शान्ति, सम्पत्तिहरूको महत्व अर्कै छ, संस्कृति बेग्लै छ । तर यी माथि उल्लिखित ‘स’ का सबै शब्दहरू भन्दा उपल्लो दर्जाको शब्द, मेरो सोचलाई लाग्दछ, त्यो हो, ‘स्वास्थ्य’ । मेरो सोचको प्रवेश बल्ल सुरु भयो ।
भन्छन् स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो । स्वास्थ्य नै यउटा यस्तो चिज हो जसले मानवलाई जन्म भएदेखि मृत्युसम्म परिभाषित गर्दछ । स्वास्थ्यका दुई मुख्य पाटा छन्, भौतिकवाद र मनोवाद । यदि मानव मन र तन स्थिर भयो भने उसले कायापलट गर्न सक्दछ ।
वस्तुगत हिसाबमा यदि यो लेख लेख्छु भने सायद मेरा भाव पोख्न मलाई शब्दको अभाव होला, यसर्थ म मेरो ‘स’ को सन्दर्भलाई स्वास्थ्यसँग जोड्न चाहन्छु । हरेक इतिहास, धर्म, संस्कृतिसँग समान र गहिरो सम्बन्ध राख्दछ स्वास्थ्यले । चाहे त्यो ग्रिकको भगवान् ‘अपोलो’ होस् या हिन्दू धर्मको ‘धन्वन्तरी’, प्रसंग उठ्छ हामी रहेको समाजको स्वास्थ्यको । यो एक विशाल सागररूपी भारि शक्ति हो–स्वास्थ्य ।
नेपालसँग स्वास्थ्यलाई एकीकृत गर्दा यसले अनेक आयमहरू छुन्छ । स्वास्थ्यलाई व्यक्तिगत नजरभन्दा पनि सामाजिक चश्मा दिन जरुरी हुन्छ । स्वास्थ्य आपैmँमा एउटा ब्रह्माण्ड हो । यसको परिभाषा खोज्दै जाँदा अनेक प्रसंग र हरप्रकारका उपकरणहरू जोडिन्छन्, जस्तै स्वास्थ्य संख्या, चिकित्सक, स्वास्थ्य सेवाका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, औषधि आदि इत्यादि ।
स्वास्थ्य र नेपालको सन्दर्भलाई फेरि ‘स’ कै सहायता चाहिन्छ । ‘सायद’ नेपालको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो भएको भए यसो हुन्थ्यो, त्यसो हुन्थ्यो इत्यादि । प्रश्न गम्भीर छ र उत्तर सायद हो, ‘स’ ।